Factory Compost Turner | Mpanamboatra Compost Turner Turner, mpamatsy
Fitaovana fanaovana composting karazana Forklift dia fitaovana fitsitsiana angovo vaovao sy ilaina amin'ny famokarana zezika biolojika sy zezika. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny famotehana avo lenta, na dia ny fampifangaroana aza, ny fametrahana tanteraka sy ny halavirana lava, sns.
ny Milina fanodinana fako biôlôjika nefika ampiasaina amin'ny fanamafisana ny fako biolojika toy ny fiompiana sy zezika akoho, fako maloto, fotaka fanivanana zavamaniry siramamy, saka mofomamy ary mofo misy mololo. Ity fitaovana ity dia mandray ny haitao malaza amin'ny fitrandrahana aerobika mitohy, nahatonga ny fako biolojika ho maina be, manadidy, manala fofona, mahatsapa ny tanjon'ny tsy fandriampahalemana, fanodinana fako ary fihenan'ny fanodinana, fanjifàna angovo ambany ary kalitaon'ny vokatra azo antoka.
Masinina kodiarana Composting Turner Machine dia fitaovana fanaovana composting sy fermentation mandeha ho azy miaraka amin'ny zezika lava sy halalin'ny zezika, fotaka sy fako, fotaka filtration, mofomamy maloto ambany kokoa ary famoam-bozaka ao amin'ny famokarana siramamy, ary be mpampiasa koa amin'ny fermentation sy ny tsy fahampian-drano amin'ny zavamaniry zezika organika, zavamaniry zezika mitambatra , ozinina maloto sy fako, fambolena zaridaina ary zavamaniry bismuth.
ny Fananganana zezika Tankina fermentation ampiasaina indrindra hanodinana sy hampifangaro ny fako biolojika toy ny zezika biby, fako maloto, fotaka fanivanana siramamy, sakafo ratsy sy tsiranoka amina mololo ary fako biolojika hafa ho an'ny fanamasinana anaerobika. Ny masinina dia be mpampiasa amin'ny zezika biolojika zavamaniry, fotaka fanariana fambolena, fambolena fambolena, fanangonam-boho amin'ny famoahana spore roa ary fanesorana ny asan'ny rano.
Ny masinina dia azo alaina mandritra ny 24 ora, manodidina ny 10-30m2 ny velarany. Tsy misy fandotoana amin'ny fananganana fermentation mihidy. Izy io dia azo ahitsy amin'ny hafanana avo 80-100 ℃ hanalana ny bibikely sy ny atodiny tanteraka. Azontsika atao ny mamokatra ny reactor 5-50m3 samy hafa fahaiza-manao, samy hafa endrika (marindrano na mitsangana) fermentation tank.
Ny endrika vaovao Tankina fampifangaroana fako sy zezika dia ampiasaina amin'ny fermentation aerobic mari-pana amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia bakteria biolojika, miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany sy ny vidin'ny fandidiana ambany.
Turner Composting Type Groove Masinina dia ampiasaina amin'ny fanamasinana ny fako biolojika toy ny fiompiana sy ny vorona akoho amam-borona, fako maloto, fotaka fanivanana zavamaniry siramamy, fotaka ary famoahana mololo. Ampiasaina be izy io amin'ny zavamaniry zezika biolojika sy zavamaniry zezika mitambatra ho fanamasinana aerobika.
Crawler Turner Compost Turner Organika no masinina matihanina ho an'ny zezika zezika sy kojakoja fambolena hafa. Izy io dia mandray rafitra fandidiana hydraulic, mandroso miasa amin'ny familiana herinaratra ary milina karazana crawler.
ny Masinina Turner Composting Turner Machine manana ny tombony amin'ny fahombiazana avo lenta, ny fampifangaroana fanamiana, ny fihodinana tanteraka ary ny halaviran-dàlana lavitra, sns. Azo ampifanarahana amin'ny fitaovana fanodinam-bola izy io mba hahatsapana ny fihodinan'ny multi-slot.
Turner Composting Groove mandeha irery Masinina dia matetika no antsoina hoe turner compost karazana lalamby, turner compost karazana lalana, milina fanodinana sns. Azo ampiasaina amin'ny fanamasinana zezika biby fiompy, maloto sy fako, sivana fotaka avy amin'ny fikosoham-bary, residu biolojika ary sawdust misy mololo ary fako biolojika hafa.